०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन हेरिकन हालको विद्यार्थी आन्दोदलन किन यतीसुस्त गतिमा?
०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने राजनीतिक जिम्मेवारी थियो । देश पञ्चायतको चंगुलमा परेर निसास्सी रहेको अवस्थामा हाम्रा अग्रज विद्यार्थी नेताहरुले देशमा प्रजातन्त्र बाहाली गर्न आफ्नो जीवनको आहुति दिएका हुन् । यति भन्दै गर्दा तपाईले भने जस्तो अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन सुस्त गतिमा हिडेको भन्ने कुरा सहि होइन । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/०६३ र त्यसभन्दा अघि जनयुद्धमा लाखौँ विद्यार्थीहरुले गणतन्त्रका लागि आफ्नो आहुति दिएकाले नै तपाई हामीले यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दैछौँ । तर, हालको विद्यार्थी आन्दोलनले चलाउनु पर्ने जस्तो खाले संघर्षको स्वरुप थियो त्यो भने चुस्त हुन नसकेकै हो ।
तपाई इन्जीनियरिङ पढेको मान्छे सहज जीवनयापनको बाटो छाडेर विद्यार्थी आन्दोलनमा किन लाग्नु भएको ?
हामी यहि नेर गलत छौँ । हामीले त्यहिँ गल्ती ग¥यौँ जहाँ हामीले राजनीति नपढेका र मजबुर मान्छेहरुले मात्र राजनीति गर्नुं पर्छ भन्ठान्यौँ । के उसो भए शिक्षितहरुसबैले या त जागिर खाने या कुनै दोस्रो तेस्रो मुुलुकको नागरिकता स्विकारेर देश छाड्ने ? अनि राजनीति खराब र भ्रष्टाचारीहरुको हातमा सुम्पेर देश विग्रिएकोमा जिवनभर सरापेर बसी रहने ? हामी शिक्षत र पठित हौँ भन्नेहरुको बुझाई यहीँ गलत रहेको मेरो ठम्याई हो । र अर्को कुरा राजनीति सबै नीतिहरुको पनि माउ नीति हो । यसलाई सुधारेर मात्र हामी असल राजनीतिक व्यवस्थामा टेक्न सक्छाँै ।